Dagaal qaraar oo ka dhacay Qansax-dheere | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal qaraar oo ka dhacay Qansax-dheere
Dowladda federaalka ayaa billowgii sanadkaan ciidamadii ka tirsanaa Xoogga Dalka, ee ku sugnaa Bay u daad-gureysay Gedo, si ay u fuliyaan dano gaar ah oo ay Fahad iyo Farmaajo lahaayeen.
QANASAX-DHEERE, Soomaaliya - Xubno ka tirsan Kooxda Al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidanka Koonfur galbeed ku leeyihiin degmada Qansaxdheere, waxaana halkaa ka dhacay dagaal xooggan.
Khasaaro kala duwan ayaa ka dhashay weerarka, Sarkaal ka tirsan ciidamada Koonfur galbeed ayaa sheegay in ay iska caabiyeen kooxdii weerarka ku soo qaaday ayna khasaaro xooggan gaarsiiyeen.
Xaaladda dagmada Qansaxdheere ee gobolka Baay ayaa saaka deggan kaddib dagaalladii ka dhacay xalay. ciidamada ayaa howlgallo ka wada duleedka degmada oo ay ku baadi goobayaan raggii weerarka ku soo qaaday.
Sanadkii 2012, ayay aheyd markii ciidamada Itoobiya ee ka tirsan howlgalka Nabad ilaalinta Soomaaliya (AMISOM) iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo is garabsanaya ay kala wareegeen Al-Shabaab degmada Qansaxdheere oo ah magaallo muhiim ah oo is ku xirta gobollada Baay, Gedo iyo Shabeelaha hoose.
Tan iyo xilligaas magaaladaan, waxa ay la dhibaatooneysay, weerarada “ku dhufo oo ka dhaqaaqa ah” ee Al-Shabaab, si la mid ah inta badan degmooyinka gobollada Bay iyo Bakool.
Maamulka uu hoggaamiyo Cabdicasiis Laftagareen, ayaa noqday gacan ku gambad, Al-Shabaab, ayaana go’doon galisay degmooyin muhiim ah oo ku yaalla KG, sida Xudur iyo kuwa kale oo muhiim ah, taas oo sababtay in diyaarado lagu geeyo maciishadda.